Fahmida Kharashkaaga – Clean Energy Columbus
Marka aad ku jirto Clean Energy Columbus, waxaa kuu sii socon doona kharash dalicida bishii hal mar ee AEP Ohio, ee shirkadaada laydhka ee deegaanka. Xadiga ay kugu leedahay AEP Energy waxaa loogu sheegi doonaa si gooni ah biilkaaga oo waxa aad kaliya sii wadi doontaa inaad u dirto lacagta shirkadaada laydhka ee deegaanka.
Fadlan hoos ka eeg jajabinta kharashkaaga. Waa aad gujin kartaa si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan macluumaadka qayb kasta oo kharashkaaga ah.
Kharashka Shayga Sadarka
AEP Ohio, tamarta deegaanka, waxay isticmaashaa 17-god ee Adeegga Bixinta Aqoonsiga (SDI) si ay ula socoto akoonkaaga. SDI-da waxa loo baahan doonaa marka aad ka baxayso ama dooranayso barnaamijka iyo/ama marka aad wacayso adeega macaamiisha si ay u caawiyaan
Ogow, ma jirto wax kharash ah "Adeeg Jiilka" ee biilkaaga marka koontada uu ku adeegayo alaab-qeybiye, sida AEP Energy. Adeegga Jiilka ayaa lagu qori doonaa haddii ay ku adeegto AEP Ohio.